Aatcc Crockmeter, Aatcc manasa ny loko matevina, fanalabahana sy famonoana famonoana - TST
Fanadinana lamba lamba lamba
Fitsapana fifadian-kanina loko
Series Series ara-batana
birao sy fanadinana fanaka ivelan'ny trano
Fitaovana fitiliana foam
Fanaovana sarimihetsika hosodoko sary
fanandramana fanaka ambony
Wood Wooden Tester
Kitapo sy fitsapana raharaha
Fanadinana Carton sy fanadinana fonosana
Tarika Matching Loko
Ny TST dia nanangona ny famolavolana rindrambaiko, milina, mekanika, tsindry solika, tsindry steam, elektronika, motor, ary fikarohana ary fampandrosoana, antoka tsara, fitantanana famokarana, fitsapana ary talenta matihanina hahazoana vaovao. TST Instruments (China) Co, Ltd dia miorina amin'ny volana martsa 2006, izay orinasa iraisam-pirenena matihanina amin'ny famokarana milina fitiliana sy fitaovana fanodinana automatique.
Niorina tamin'ny 2006
Traikefa 14 taona
Mihoatra ny 100 vokatra
Soraty ny vahaolana amin'ny fitaovana fitiliana laboratoara ary mampifangaro ny famokarana, ny famolavolana ary ny fikarohana ary ny fampandrosoana
Tester and suitcases Tester
Ny fifadian-kanina loko
vahaolana fitsapana laboratoara
Fampiasana: Ny valin'ny fanadinam-panadinana PM dia mety amin'ny fitiliana ny fahombiazan'ny fitaovam-panatanana grika 45% -99.9%. Ny fitaovana misy sivana dia nosedraina araka ny fenitra iraisam-pirenena. Ny rafitry ny famolavolana ny toby fanandramana manontolo dia marefo sy maivana ary rehefa eo am-panaovana ny fanadinana dia mila manome hery sahaza sy rivotra manosika fotsiny (tsy misy rano, tsy misy solika), mety hampiasaina any amin'ny laboratoara, orinasa ary ny hafa toe-javatra. Ao amin'ny fanadinana taratasy fanivanana, ny ...
Ny fanoherana ny ...
Fihetsiketsehana Crush Tester / Edge ...
Materia miloko fiarovana ...
Wallpaper azo ampiasaina ...
Transpo lehibe simulate ...
Entana fonosina ...
ISO535 Cobb Paper ary ...
Dry Chemical Dryin ...
Fanamboarana kiraro ...
Wooden Furniture mecha ...
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, ny indostrian'ny fananganana birao any Shina dia namolavola be.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, ny indostrian'ny fananganana birao any Shina dia namolavola be. Raha ny fampandrosoana haingana ny fanaka birao, ny kalitao vokatra dia olana ihany koa izay tsy azo hodian-tsy hita. Noho izany, ny mpanamboatra mpanamboatra matetika dia mifantina fitaovana fanandramana fanaka matihanina ho toy ny prod-ny ...
Donghai avenue CJ-23, Donghaibincheng, Valan-javaboary, Quanzhou, China